Ukutyikitywa kweApple kuya kuyikhathalela impilo yethu nangakumbi | Ndisuka mac
Andisazi ukuba kukangaphi ndithetha ngezibonelelo ze-Apple Watch ngempilo yethu. Esi sisixhobo nangona sincinci, senza izinto ezinkulu kakhulu kwaye sivelisa izibonelelo ezininzi zabasebenzisi kunye nenkampani uqobo. Sijonge ngokujonga iintliziyo zethu, ioksijini yegazi lethu kunye nokujonga ukuwa kwethu phakathi kwezinye izinto. Kodwa inkampani ifuna ngaphezulu kwaye kuyabonakala kusayino lokugqibela. Uqeshe ingcali yonyango lwezonyango ukunceda ukumilisela itekhnoloji entsha yokhathalelo lwempilo kwizixhobo zeApple.
Njengoko kuchaziwe ku MyHealthyApple, inkampani iqeshe "i-cardiologist ephezulu kunye neemveliso zempilo zangaphambili kunye namava obuchwephesha." I-cardiologist iya kubambisana namaqela ahlukeneyo ekuchongeni iinkalo eziphambili zokugxila ngokuqwalasela imveliso ye-Apple kunye nobuchwepheshe kunye nokuchaza uphuhliso lweekhonsepthi zemveliso ezintsha.
Isibhengezo somsebenzi yapapashwa kwinethiwekhi ye-LinkedIn yezentlalo Apho unokufikelela kwiimfuno ezivezwe nguApple kumgqatswa ogqibeleleyo. Ngale ndlela yayiceliwe ukuba inayo amava anzulu kwi-cardiology nangaphezulu kwako konke, namava angaphambili kwiimveliso zempilo kunye netekhnoloji. Iimveliso zonyango ezilawulwayo ezikhethiweyo kunye / okanye iimveliso zedijithali. Ingathathelwa ingqalelo njengeprofayile elungileyo ukuba umntu ochaphazelekayo unamava kuphuhliso lwezonyango lweemveliso zempilo ezilawulwayo, kubandakanya nezifundo ezibalulekileyo zeklinikhi. Unxibelelwano olomeleleyo kunye nezakhono zombutho, ukubanakho ukusebenza ngokubambisana kunye noluhlu olubanzi lwamalungu eqela kunye neengcali.
Kucacile ukuba esi sithuba siza kujolisa ekuphuculeni umgangatho we-ECG kunye nomlinganiso wenqanaba lentliziyo le-Apple Watch. Kodwa sicinga ukuba inkampani izakuzama ukwenza isoftware entsha yeApple Watch kwimicimbi yentliziyo. Okwangoku siyazi ukuba isixhobo sibusindisile ubomi babasebenzisi abaninzi, kubandakanya ilungu leli qela leSoy de Mac. Ke yonke into eza kuphuculwa kule ndima, wamkelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukutyikitywa kweApple kuya kuthatha ukhathalelo lwempilo yethu
I-Apple ityale i-50 yezigidi zeedola kwiqonga labaculi abazimeleyo i-UnitedMasters